Ogaden News Agency (ONA) – Banaanbaxayada ka socda Adisababa iyo gobolo kale oo sii karaar qaatay iyo dhimashada oo boqolaal gaadhaya
Banaanbaxayada ka socda Adisababa iyo gobolo kale oo sii karaar qaatay iyo dhimashada oo boqolaal gaadhaya
Posted by ONA Admin	/ May 5, 2014
Dhawrkii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa hadheeyay saxaafada caalamka mudaaharaadyo ay ku naf-waayeen in kabadan 100 muwaadin oo Itoobiyaan ah kuwaasoo badankood ay ka dheceen deegaanka Oromada.
Mudaaharaadyadan ayaa dhaliyay xaalad aad u qalafsan oo horseeday in Arday iyo shacab farabadan oon waxba galabsanin ay ku naf-waayaan. Sida wararka qaar ay tibaaxayaan waxay dhimashadu kor u dhaaftay 100 qof meesha dhaawucuna uu gaadhayo dhawr boqol. Dhanka kale waxaa la sheegayaa in jeelka loo taxaabay tiro kor udhaafaysa 1000 (kun) qof kuwaasoo iskugu jira Arday iyo dad rayad ah oo ku dhaqan deegaanada ay mudaaharaadyadu kadheceen.
Mudaaharaadyadan oo intooda badan kadhacay jaamacado kala duwan sida Ambo, Alem Maya, Jimma iyo Lekemt ayaa bilaambay dhamaadkii bishii hore. Dhacdooyinkan iyo gumaadkan aan shacabka rayadka ah lookala aabayeelin yay ciidamada maxaystada ah ee Wayaanuhu kagaysteen goobo ay shacabku iskugu soobexeen banaan baxyo sinabadgaliyo ah kubilawday kuwaasoo ay hormuud uyihiin ardayda wax kabarata Jaamacadaha iyo iskuulada caadiga ah.
Banaanbaxyadan yaa kadhashay kadib markuu Gumaysiga Itoobiya kusoo rogay cadaadis iyo cabudhin aan xuduud lahayn taasoo kadhan ah shacabka rayadka ah. Waxay kudhawaaqayeen dadkii banaan baxan kaqaybgalay hal-kudhagyo ay kamid yihiin :- Waxaan rabnaa xoriyad, waxaan rabnaa cadaalad iyo sinaan, waxaan rabnaa xuquuqdaanadii asaasiga ahayd ee dawladu duudsiday iwm. Sida lawada ogsoonyahay wuxuu shacabka Itoobiya kunoolyahay nolo aad u adag taasoo keentay kacdoonkan hadheeyay wadanka oo idil gaar ahaan gobolada qawmiyada Oromadu kubadantahay.
Dhanka kale waxaa maanta mudaaharaad balaadhan oo gilgilay magaalada Addiss Ababa sooqaban qaabiyay Xisbiga Midnimada ee Cadaalada iyo Dimuqraadiga kaasoo ay taageerayaashoodu sibalaadhan oogu mudaaharaadeen cadaadiska Gumaysiha TPLF uu kuhayo xoriyatul Qawlka iyo Xuquuqda Aaadanaha. Dadkii kaqaybgalay isku soobaxan maanta yaa aad ooga cadhaysnaa xadhiga iyo dhibaatooyinka kala duwan ee lagu hayo bulshada rayadka ah ee kunool guud ahaan wadanka Itoobiga gaar ahaan caasimada Addiss Ababa oo kamid noqotay meelaha oogu liita ee banii,aadam uu kunoolaado aduunka.
Wakaaladaha wararka ee caalamiga ah qaar kamid ah sida AP iyo BBC ayaa kadiyaariyay warbixino iskugu jira maqal iyo muuqaal kuwaasoo ay kusoo bandhigeen tacadiyada iyo dhibaatooyinka kaleduwan ee ciidan nabad sugida Gumaysiga Itoobiya ay kula dhaqmeen bulshadii rayadka ahayd ee mudaaharaadyadan iskugu soobaxay.
Mid kamid ah dadkii ka qaybgalay mudaaharaadyadan kadhacay tuulada Ambo ee indhohooda ku arkay shacabkii sida naxariis darrada ah loogumaaday oo waraysi siisay wakaalada wararka ee BBC da yaa tiri (I saw more than 20 bodies on the streets) waxaan arkay 20- mayd ah oo wadooyinka daadsan. Iyadoo hadalkeeda siiwadata waxay raacisay gabadhan (I am hiding in my house because I am scared) Waxaan kudhuumanayaa gurigayga sababtoo ah waan cabsaday.
Hoos waxaad kadaawan kartaan heerka uu gaadhsiisan yahay dhibaatada shacabka soogaadhay.